Ụdị Of USB Flash Drive
All mkpa ka ị mara banyere dị iche iche nke USB Flash draịva
Mmalite nkwado: Gịnị bụ a Flash Drive?
A flash mbanye bụ a na ngwaọrụ na ike ga-eji zọpụta ọmụma n'otu obere, flash ebe nchekwa mgbawa. Ọ nwere ike na-agụ na e dere. Ndị a nchekwa ngwaọrụ e mere na-nta karịa a ahụkarị nchekwa disk, na ụfọdụ ịbụ ndị size nke a mkpịsị aka. Ọ bụ ya mere ụfọdụ ndị maara ha dị ka pen-draịva, mgbe ndị ọzọ na-ahọrọ na-akpọ ha "mkpịsị aka draịva."
Ihe ọ bụla aha, ha nile òkè onye e ji mara: ha nwere ike ekirikarị na ọ bụla na kọmputa, ekele ha eluigwe na ala Oghere Usoro ụgbọ ala (USB) n'ọdụ ụgbọ mmiri ndakọrịta.
Ebe a, anyị na-aga n'elu dị iche iche nke USB flash draịva. A na-ezo aka dee bụ na ha nwere ike categorized dị ka ha ojiji, ma ọ bụ dị ka anụ ahụ ha mara. Anyi na-agbali na-akwado n'etiti abụọ.
Categorization Dị ka ha na-eji
Nche Flash Drive
Nke a bụ a nkịtị USB flash nchekwa na ngwaọrụ na a isi ighikota na okwu nke nzọụkwụ iwere iji chebe data. Ọ na-e wusiri ike na anụ ahụ na / ma ọ bụ ihe ezi uche nchebe iji hụ na data na-adịghị mie ala. Otu ihe atụ bụ flash mbanye si Cryptex, nke nwere Nchikota mkpọchi tupu ị nwere ike ịnweta USB disk agbakwunyere n'ime. Ndị ọzọ na-ndị si IronKey, nke bịa na-esịtidem usoro (dị ka paswọọdụ nchebe na izo ya ezo maka kwukwara nche). Niile na ihe niile, ndị a na ngwaọrụ abịa na kwukwara nche maka nchedo nke data.
Nke a bụ a flash mbanye na ike ga-eji zọpụta ma ọ bụ nyefee music site na otu ngwaọrụ ọzọ. Ha nwere ike ịdị iche fancy aghụghọ, dị ka onye a Trident. Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime ha na-e mere na-miniature na size, welie portability. Ihe kpatara nke a bụ na ọtụtụ ndị chọrọ na-ebu ha ọzọ music faịlụ gburugburu na a flash mbanye ga-achọ ka ha-n'ime mfe iru, mgbe ha na-si ụzọ.
Buut Flash Drive
A buut flash mbanye bụ nanị nkịtị USB ebe nchekwa mkpisi na e nyeere iji wụnye ihe sistemụ. Usoro nke ịrara mpụga nchekwa na ngwaọrụ na-eje ozi nzube a kwuru na "a ga-eme bootable." Mgbe ọ bụla i nwere kọmputa na-agaghị na-amalite n'ihi a efu sistemụ, nanị na-a buut flash mbanye na ọkụ ruo kọmputa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị otu ugbu a, ga-esi ya maka na nọrọ na njikere ihe.
Categorization Dị ka ha na Ọdịdị
Dị ka aha na-atụ aro, nke a bụ USB flash mbanye na e ahaziri anya dị nnọọ ka a kaadị. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ọbụna-n'ihu ahaziri na-ebu aha mkpado nke onye nwe, nakwa dị ka a kenha adịgboroja nọmba kaadị akwụmụgwọ. Ndị mmadụ nwere dị iche iche ihe nke na-ndị dị otú ahụ a flash mbanye ma otu ihe n'ihi na n'aka: ị ga-echefu ya n'ụlọ ọzọ, ebe ọ bụ na i nwere ike dabara ya snugly n'ime a obere akpa.
Key- yinye USB Flash Drive
Ọ dịghị ihe na fancy banyere nke a flash mbanye, e wezụga eziokwu na ọ na e e na-ebu ke ahụkarị isi agbụ. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ọ na-overrated n'ụzọ ọ bụla. Kama nke ahụ, ọ nwere ike abịa kemfe maka ndị na-echefu, ma e-adịkwa ha flash disks ugboro ugboro.
Ebe ọ bụ na ha na-mara mma e mere, ị nwere ike ịzụ ahịa n'ihi na ihe ornate otu (izere nkịtị nsogbu nke na-achọ ochie), tinye gị na ụgbọ ala igodo.
Ọ dịghị ihe na ọtụtụ ihe na-ekwu banyere nke a flash mbanye, n'ezie, ebe ọ bụ ndị nile na-aha. Ikekwe, ị pụrụ tinye eziokwu na ọ nwere ike ghara ịbụ waterproof - N'ihi ya ị na-ekwesịghị iri ya ndị mmiri. Ndị ọzọ karịa na, ya anya "atọ" posh!
Ewere USB Flash Drive
Ọ bụrụ na ị bụ onye na anwụ anwụ-ike ofufe nke a ika, o nwere ike ịbụ oge na-egosi ịhụnanya gị ka aha ya site na-a ewere USB disk. E nwere n'ụzọ nkịtị tonnes nke ndị a USB nchekwa ngwaọrụ si n'ebe, na-eche gị na-achọpụta ha. Ebe a na-n'omume.
"Dummy Head" USB Devices
Ọ bụrụ na ị nwere na-akpa ọchị ọkpụkpụ, ebe a bụ ụfọdụ nke props nwere ike ị chọrọ iji nweta decorating gị oche. Ha na-miniature dummies nke na-ewu ewu na ọnụ ọgụgụ, dị ka football Player ma ọ bụ nkiri kpakpando. Dabere na gị mmasị, ị nwere ike họrọ si dị iche iche selections dị si n'ebe.
E nwere imerime imewe nke USB flash draịva si n'ebe. Ndị a nwere ike categorized site, arụmọrụ ma ọ bụ ọbụna larịị nke nche izo ya ezo. Dị ka ìgwè mmadụ ahụ na-akpali ka ígwé ojii maka nchekwa, i nwere ike nweta gị onwe gị ahaziri flash mbanye maka offline ojiji. Ọ bụ oge na-akpali gị nkasi obi mpaghara na-amalite na-enwe dị iche iche aghụghọ.
Agụ nanị flash mbanye - esi tinye ma ọ bụ wepu dee nchebe
Ndị kasị mma 10 Flash Drive Iweghachite Ngwaọrụ
Terabyte flash mbanye zoo - nyochaa maka poplular flash mere ihe karịrị 1GB
Ihe karịa gị nwere ike iche - ihe a USB flash mbanye nwere ike ime
All na ị chọrọ ịmata banyere kaadị flash mbanye
Olee otú naghachi faịlụ site transcend Flash Drive
> Resource> Flash Drive> All mkpa ka ị mara banyere dị iche iche nke USB Flash Drive